Dreame L10 Pro: analysis, price na atụmatụ | Akụkọ Ngwa
Dreame L10 Pro: nyocha, ọnụahịa na atụmatụ
Miguel Hernandez | 25/11/2021 08:51 | Emelitere ka 25/11/2021 08:53 | Ngwa
Anyị na-eji ngwaahịa Dreame na-alọghachi maka ihicha ụlọ, otu n'ime ihe ndị a na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya. Anyị nwere Dreame T20 n'oge na-adịbeghị anya ebe a, onye na-ehicha oghere na-arụ ọrụ na ọkwa nke njedebe dị elu na nke ahụ hapụrụ anyị ezigbo mmetụta.
Yabụ ugbu a, anyị na-aga n'ihu na ngwaahịa ọhụrụ a, igwe nhicha ikuku robot Dreame L10 Pro, ngwaahịa dị okirikiri nke nwere ike inyere anyị aka idobe ụlọ anyị ọcha. Nọnyere anyị wee chọpụta ka Dreame L10 Pro si abịa asọmpi ozugbo na ngwaahịa kachasị ọnụ na ahịa na ma ọ bara uru ma ọ bụ na ọ bara uru ugbu a.
1 Njirimara nka Dreame L10 Pro
2 Nnwere onwe na ojiji kwa ụbọchị
3 Oghere dị mma, ihe nhicha "dị mma".
Njirimara nka Dreame L10 Pro
Nke a Dreame L10 Pro nwere ike kacha nke 4.000 paụ aṅụ, nke dị n'ime nkezi nke ihe ụdị ngwaahịa ndị a na-enye n'ime oke nke igwe na-ekpo ọkụ robot n'otu ọnụ ahịa na ọbụna karịa. Maka akụkụ ya, o nwere ikike na 570 ml nke tank siri ike, mgbe mmiri mmiri esite maka Ntucha na-adị na 270 ml. Ihe ndị a niile na-esonyere chassis ojii ojii a na-ahụkarị, yana sensọ ya n'elu.
Ihe dị n'ime igbe ahụ bụ ndị a:
Ngwá ọrụ ọtụtụ ebumnuche
Nkwụnye ego siri ike
Akụkụ na etiti ahịhịa
Anyị enweghị, n'ezie, ụdị ọ bụla nke "mgbakwunye" ngwaahịa maka mmezi ma ọ bụ nnọchi nke components, mgbe ha na-akawanye njọ, anyị ga-aga na-emekarị mgbe ire ere, ndị ahịa maka oge ị na-amaghị. Ihe anyị doro anya bụ na ọ bụ ngwaahịa nwere akụkụ nke 350 x 350 96 millimeters nke na-enye ngụkọta ịdị arọ nke 3,7 Kg, Nke ahụ abụghị obere, mana ọ dịkwa n'ime oke nkịtị n'ụdị ngwaọrụ a.
Nnwere onwe na ojiji kwa ụbọchị
N'iji ya eme ihe kwa ụbọchị, robot a na-enye ụda kachasị nke ga-adị gburugburu 60 db n'oge ọ kacha dị oke egwu, n'ime nhazi dị iche iche enyere site na ngalaba nke ngwa Mi Home, nke, dịka ị maara nke ọma, bụ nke na-achịkwa gburugburu Xiaomi jikọtara ya na ngwaahịa ya, na-adaba na ha abụọ. android dị ka na iOS n'ozuzu
Banyere obodo, anyị na-enweta ihe dịka 5.000 mAh kwupụtara site ika, nke a ga-enye anyị Cleans nke gburugburu 150 nkeji ma ọ bụ ruo 200 mita, Eziokwu na anyị enweghị ike ịchọpụta n'ihi na anyị enweghị nnukwu ụlọ (na-atụ anya), mana ọ na-abịa na gburugburu 35% na njedebe nke nhicha. Nhicha zuru oke nke ọma, na-enweghị gafere n'oge gara aga na nke na-ezute arụmọrụ nke enwere ike ịtụ anya site na ụdị nyocha nke gburugburu ebe obibi ekele. eserese nke gburugburu ebe obibi na 3D (site na LiDAR) ejiri ihe nkedo nke ihe mmetụta mee. Na ngafe nke mbụ, dịka ị maara nke ọma, ọ ga-adị ntakịrị nwayọ, ebe site ugbu a gaa n'ihu ọ ga-eji ohere na oge eme ihe ekele maka ozi a mụtara.
Oghere dị mma, ihe nhicha "dị mma".
Dị ka mgbe niile, n'agbanyeghị ole teknụzụ ha gụnyere, ịchafụ bụ ihe nkedo mmiri na-arụ ọrụ ya, mana ọ gaghị ewepụ akara unyi kachasị mkpa. Anyị nwere mkpa gburugburu ebe obibi. Ka o sina dị, n'ozuzu anyị nwere ezigbo uzo ozo na Dreame L10 Pro, akara nke, n'aka nke ọzọ, bụ akara ngosi ekele maka mmekọrịta chiri anya n'etiti àgwà na ọnụahịa.
Anyị nwere, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, mekọrịta ya na Amazon Alexa na Google Assistant, Ya mere, ụbọchị ga-adị mfe ma ọ bụrụ na anyị na-ajụ anyị virtual nnyemaaka na ọrụ. A na-atụ aro ngwaahịa, nke afọ ojuju anyị n'ozuzu ojiji na ị nwere ike zụta ebe a na nkwa Amazon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Dreame L10 Pro: nyocha, ọnụahịa na atụmatụ
Starkvind bụ usoro IKEA maka ịmegharị ikuku dị ọcha [Analysis]
Black Friday: Nke kachasị mma na mgbasa ozi, ngwa na wearables